10 ဥရောပ၌မိသားစုစခန်းချနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပ၌မိသားစုစခန်းချနေရာများ
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 12/03/2021)
စိမ်းလန်းစိုပြေသောစိမ်းလန်းသောချိုင့်ဝှမ်း, ကြီးမားသောချောက်အမြင်များ, ကမ်းခြေ, သို့မဟုတ်ချစ်စရာကောင်းမြို့များ, ဥရောပသည်မိသားစုစခန်းချနေထိုင်ရန်အတွက်အံ့ဖွယ်နေရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်. အဆိုပါ 10 ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမိသားစုစခန်းချနေရာများသည်ပြီးပြည့်စုံပါသည် နွေရာသီအားလပ်ရက်, ဆောင်းတွင်းပင်. သူတို့အားလုံးလှပသောရှုခင်းများနှင့်သဘာဝတရားဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်, နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဥရောပအတွက်မမေ့နိုင်သောမိသားစုအားလပ်ရက်များအတွက်ဒီဇိုင်း.
1. သြစတြီးယားတွင်အကောင်းဆုံးမိသားစုစခန်းချနေရာများ: အမြင့်စား
နတ်သမီးပုံပြင်ကဲ့သို့မြို့များ, လှပသောမြက်ခင်းပြင်, နှင့် Alps ရှုခင်း, အဆိုပါ အမျိုးသားဥယျာဉ် Hohe Tauren ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှပါ 10 ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမိသားစုစခန်းချနေရာများ. ဥပမာ, ထိုဒေသရှိအကောင်းဆုံးစခန်းချနေရာများအနက်မှတစ်ခုမှာကျော်ကြားသော Grossglockner တောင်ကိုအပေါ်စီးမှကြည့်ရှုပြီးသြစတြီးယားတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော Grossglockner ဖြစ်သည်.
ဖြည့်စွက်ကာ, အရှေ့ Tirol ရှိ Innergschloss သည် Alps အပေါ်လှပသောရှုခင်းများရှိသည်, မိသားစုစွန့်စားမှုနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. နောက်ထပ် Hohe Tauren မီးမောင်းထိုးပြချက်တစ်ခုမှာနှစ် ၆၀၀ သက်တမ်းရှိ Zedlach သစ်ပင်သစ်တောဖြစ်သည်, ဘယ်မှာသင်တစ် ဦး များအတွက်အံ့သြဖွယ်အစက်အပြောက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် မိသားစုပျော်ပွဲစား.
ကောက်ချက်ချရန်, Hohe Tauren အမျိုးသားဥယျာဉ်ရှိမိသားစုစခန်းသည်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်. အားလုံးကိုချွတ်ရန်, သင်သည် Eco-friendly ICE ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းဖြင့်သြစတြီးယား၌သင်၏အစိမ်းရောင်အားလပ်ရက်ကိုစတင်နိုင်သည်.
2. ပြင်သစ်တွင်အကောင်းဆုံးမိသားစုစခန်းချနေရာများ: Dordogne ချိုင့်
အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Dordogne ချိုင့်ဝှမ်း၌တည်၏, Camping Le Pontet သည် Isle မြစ်ပေါ်တွင်ရှိပြီးလှပသော Perigord chateaux နှင့်နီးသည်. Le Pontet, သင်သည်စခန်းချနေရာနှင့်မိုဘိုင်းအိမ်ငှားရမ်းခြင်းတို့ဖြင့်ကောင်းမွန်သောကြယ်သုံးပွင့်မိသားစုစခန်းချနိုင်သည်. ဒါကြောင့်, ကလေးတွေအိုင်ထဲမှာဖြန်းနေစဉ်, သငျသညျငါးဖမ်းသို့မဟုတ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပျော်မွေ့နိုင်ဘူး. မတူတာကတော့, သင်ရှုထောင့်ကိုတက်တက်သွားပြီး Dordogne ချိုင့်ဝှမ်းကိုအတူတကွလေးစားမိနိုင်သည် – မိသားစုဓါတ်ပုံများအတွက်အကောင်းဆုံး.
Le Pontet မိသားစုစခန်းသည်လှပသော Rhone-Alps ဒေသတွင်ရှိသည်, Ardeche Gorges အနီး သဘာဝအရံ. ထိုကွောငျ့, သငျသညျရိုင်းသဘာဝရှာဖွေစူးစမ်းအံ့သြဖွယ်အချိန်ရပါလိမ့်မယ်, တောင်တက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းကဲ့သို့သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ, နှင့်နေရောင်နှင့်လတ်ဆတ်သောလေထုတက်စိမ်.
3. Brittany ရှိ Ty Nadan မိသားစုစခန်း, ပြင်သစ်
ဥရောပရှိလှပသောကမ်းရိုးတန်းတစ်ခုတွင်, Brittany ရှိ Ty Nadan သည်စုံလင်သောပင်လယ်ကမ်းခြေမိသားစုစခန်းချနေရာဖြစ်သည်. Ty Nadan စခန်းချရာနေရာသည်သဘာဝနှင့်ကမ်းခြေတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, မင်းရဲ့ကလေးတွေကိုပင်လယ်ကမ်းခြေကိုခေါ်သွားတာကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်, sandcastles တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်နေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ပါ, ကနူးရန် သို့မဟုတ်သစ်ပင်တက်ခြင်း. ဒီစခန်းချရုံသည် 20 Brittany ရှိကမ်းခြေနှင့်မိနစ်ပိုင်း.
ထို့အပွငျ, စခန်းချနေရာသည်ကလေးငယ်များနှင့်ကလေးငယ်များရှိသောမိသားစုအားလပ်ရက်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်. ကလေးဂီယာအိတ်နှင့်ကလေးများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်’ ည ဦး ယံ၌ဖျော်ဖြေရေး. ထိုကွောငျ့, မင်းဟာမမေ့နိုင်တဲ့မိသားစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Brittany ကမ်းရိုးတန်းမှာစခန်းချနေရတာအမှန်ပဲ.
4. နယ်သာလန်၌စခန်းချနေရာ: Gelderland
စိမ်းလန်းစိုပြေသော tulips နှင့် Veluwe တို့၏နေအိမ်, Gelderland သည်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိမိသားစုအတွက်အလွန်ကောင်းသောစခန်းချနေရာဖြစ်သည်. သင်နှင့်ကလေးများသည် Veluwe အမျိုးသားဥယျာဉ်ကိုချစ်မြတ်နိုးမည် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်, ပြီးနောက် 200 Appeltern ၏ဥယျာဉ်တော်.
Jutberg နဲ့ Ackerstate တို့ပဲ2Gelderland အတွက်အများအပြားစခန်းချနေရာများ, မင်းရဲ့ယာဉ်တန်းဒါမှမဟုတ်တဲကိုကားရပ်လို့ရတယ်. နယ်သာလန်သည်မိသားစုအားလပ်ရက်အတွက်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးငယ်တွေ၊ ကလေးငယ်တွေ၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့တောင်စူးစမ်းဖို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်.
5. Bavaria Germany တွင်အကောင်းဆုံးမိသားစုစခန်းချခြင်း
ဒူဘီမြစ်နှင့် Franconia စပျစ်ခြံများနေထိုင်ရာ, Bavaria သည်မိသားစုများအတွက်ကောင်းမွန်သောစခန်းချနေရာဖြစ်သည်. သင်၏ယာဉ်တန်းမှသို့မဟုတ်တဲထဲမှထွက်ခွာခြင်းကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ, အပျော်တမ်းစပျစ်ဥယျာဉ်မှ, သဘာဝမိသားစုစွန့်စားမှု၏တစ်ရက်ပြီးနောက်.
တောင်ပေါ်တွင်စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်လှည့်ပတ်လှည့်လည် Bavarian သစ်တော, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရှာနေ, လိပ်ပြာ, နှင့်ရှားပါးသောငှက်များ – Bavaria သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောနွေရာသီစခန်းချနေရာဖြစ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, သငျသညျဒေသတွင်းအံ့သြဖွယ်ရေကန်များအပြည့်အဝကြောင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, နုရှန်ဝိန်းစ်ရဲတိုက်ငယ်သည်နိုက်နှင့်မင်းသမီးများအတွက်, ပြီးပြည့်စုံသောမိသားစုနွေရာသီအားလပ်ရက်ကိုပြီးမြောက်ရန်.
တစ် ဦး ငှက်ရဲ့မျက်စိကနေဒါမှမဟုတ်တောအုပ်၌နက်ရှိုင်း, ဂျာမနီရှိသစ်တောသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်လှပသောသဘာဝသိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်. တောအုပ်သစ်တောဒေသတွင်စခန်းချနေရာများစွာကိုဂျာမနီ၌လူကြိုက်များသောကြောင့်သင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်.
ထိုကွောငျ့, သင်၏ကုလားအုတ်ယာဉ်ကိုရှေးဟောင်းမြို့များနှင့်နီးကပ်စွာရပ်ထားရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်, သို့မဟုတ် လှပသောရေကန်များ နှင့်တောင်များ. ဥပမာအားဖြင့်, Titisee မှ Campingplatz Weiherhof သည်မိသားစုအားလပ်ရက်အနားယူရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, Wolfach စခန်းချခြင်းသည်တောင်တက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းမိသားစုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
7. Tuscany Italy ရှိမိသားစုစခန်းချခြင်း
Tuscany တွင်စခန်းချခြင်းသည်သင်၏အရသာဆုံးမိသားစုအားလပ်ရက်ဖြစ်လိမ့်မည်. အဆိုပါတောက်ပသောအစိမ်းရောင်တောင်ကုန်း, စပျစ်ဥယျာဉ်, ဒေသခံဒိန်ခဲ, နှင့် truffles Tuscany အချက်အပြုတ်ကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ. ကလေးများအတွက်ခေါက်ဆွဲနှင့်ပီဇာများလည်းရှိသည်, မိဘများဒေသခံဒေသခံဟင်းလျာများကိုခံစားနေစဉ်.
စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, Tuscany သည်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများကိုပေးသည်, ကဲ့သို့ ရေပန်းခြံများ. ကလေးတွေရေထဲမှာဖြန်းနေတုန်းဒီမှာထိုင်ပြီးထိုင်နေနိုင်တယ်, အနီးအနားရှိမြို့များသို့သင်၏တစ်နေ့တာ - ခရီးစဉ်ပြီးနောက်, Pisa နှင့် Sienna.
စကားလုံးတစ်လုံးထဲမှာ – စံပြ, Tuscany သည်ဥရောပ၌မိသားစုနေထိုင်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, အမှန်ပင်တစ် ဦး ဝှက်ထားသောစခန်းကျောက်မျက်.
8. ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးမိသားစုစခန်းချနေရာများ: ဆွစ် Alpine ရေကန်
ဇိမ်ခံ camping သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တဲသို့မဟုတ်ဗင်၌တည်၏, ဆွစ်တောင်တန်း Alps ရှိသည် အံ့သြဖွယ် glamping သောနေရာများ နှင့်ဘတ်ဂျက် - ဖော်ရွေမိသားစုစခန်းချနေရာများ. သငျသညျနွေရာသီအတွက်မိသားစုစခန်းချစီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် Swiss Alps ရှိ Arolla စခန်းချနေရာသည်ပြီးပြည့်စုံသည်, ဒါကြောင့်တောင်ပေါ်မှာမြင့်မားသောတည်ရှိပြီးကတည်းက. ဒီမှာသင်ရပါလိမ့်မယ် ရင္သပ္ရႈေအမြင်ချင်း, အေးအပူချိန်, နှင့်များစွာသော တောင်တက်လမ်းကြောင်း.
သို့သျောလညျး, သင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောစိတ်အေးလက်အေးအတွေ့အကြုံကိုပိုနှစ်သက်လျှင်, ထို့နောက်ရေကန်နားမှာစခန်းချခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ပထမဦးစွာ, ပူတယ်ဆိုရင်, သင်ရုံအိုင်ထဲသို့ခုန်နိုင်ဘူး. ဒုတိယအ, လှပသောရှုထောင့်များရှိလိမ့်မည်, သင်၏ camper နှင့်ဝေးလွန်းမသွားလာဘဲ.
အဓိကအချက်မှာဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်းများသည်ကွဲပြားခြားနားသောစခန်းချနေရာများစွာကိုကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်. ဖြေလျော့ပေးခြင်းမှတက်ကြွစွာအားလပ်ရက်အထိ, အိုင်ကမ်းခြေသို့မဟုတ်တောင်တန်းအမြင်များ – အားလုံးအံ့သြစရာ.
9. အီတလီနိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးမိသားစုစခန်းချနေရာများ: Lake Garda ရှိ Brione စခန်းချနေရာ
Garda ရေကန်၏ ဦး ခေါင်းမှာ, 4-ကြယ်ပွင့် Camping Brione သည်အီတလီနိုင်ငံရှိမိသားစုများအတွက်စခန်းချနေရာဖြစ်သည်. အိုင်၏အမြင်များမှနှိုး, ရေကူးအတွက်ခုန်, သို့မဟုတ်သင်၏ကျောပေါ်ရှိကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုနှင့်သင်၏တဲအပြင်ဘက်တွင်မိသားစုညစာစားခြင်း, မိသားစုပျော်စရာများအတွက်စံပြစာရွက်ဖြစ်ပါသည်.
Brione မှာစခန်းချသည် 20 တဲများ, နှင့် 39 မိုဘိုင်းအိမ်များငှားရန်ရှိသည်, လျှပ်စစ်မီး, နှင့်အံ့သြဖွယ်အဆောက်အ ဦ, ကလေးအခန်းတစ်ခန်းအပါအ ၀ င်. သင့်မိသားစုတက်ကြွအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်, ထို့နောက်စက်ဘီးစီး။ အိုင်နှင့်တောင်တန်းများသို့ခရီးထွက်နိုင်သည်, သို့မဟုတ်ရေအားကစားကိုနှစ်သက်ပါ. သို့သော်ငြားလည်း, သင်ရုံစခန်းချနေရာသို့မဟုတ်ရေကန်ရဲ့ကမ်းခြေပေါ်ရှိရေကူးကန်အားဖြင့်အေးနှင့်တစ် ဦး စိတ်ပြေလျော့မိသားစုမိသားစုရှိသည်နိုင်ဘူး.
10. ဥရောပတိုက်တွင်စခန်းချနေရာများ: Verdon ချိုင့်
Gorges du Verdon ၏အစွန်းတွင်, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ကလေး - ဖော်ရွေစခန်းချ၌တည်၏, ရေကန်ရှုခင်းများနှင့်အတူသို့မဟုတ်ဇိမ်ခံစခန်းချအဆောက်အ ဦ ၌တည်၏, Gorges du Verdon ရှိမိသားစုစခန်းသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမရှိပါ. Gorges du Verdon သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အထင်ရှားဆုံးသဘာဝသယံဇာတတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့်နွေရာသီအတွက်မိသားစုစခန်းချဘို့စုံလင်.
ချောက်ကြီးနှင့်ရေကန်များနှင့်နီးကပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်, မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်ရေအားကစားလှုပ်ရှားမှုများစွာရှိသည်. ဥပမာ, ထိုဒေသရှိစခန်းချနေရာအများစုတွင်ရေပန်းခြံများနှင့်ရေကန်များရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်ကရေကန်အနားမှာအနားယူနိုင်ပါတယ်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, သငျသညျအံ့သြဖွယ်တောင်တက်လမ်းကြောင်းများထဲမှစူးစမ်းသွားနိုင်ပါတယ်, အံ့ဘွယ်သောသဘာဝအရံ၌တည်၏.
အကျဥ်းရုံးသည် – ကိုယ့်အပေါ်သင်၏သုတေသနလုပ်ပါ Verdon ချိုင့် ကြိုတင်မဲစခန်းချခြင်းနှင့်ဘွတ်ကင်, ဤသည်မိသားစုစခန်းချဘို့အလွန်ရေပန်းစားနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကတည်းက, သို့ပြုလျှင်သင်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏ခရီးကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည် 10 ရထားဖြင့်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမိသားစုစခန်းချနေရာများ.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးမိသားစုစခန်းချရန်နေရာ ၁၀ ခု "ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ထည့်သွင်းလိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamily-camping-destinations-europe%2F%3Flang%3Dmy‎ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
စခန်းချ စခန်းချနေရာများ CampingDestinationsEurope စခန်း မိသားစု မိသားစု ဇော်လင်း တဲ